Kala duwanaanshaha dakhliga oo sii kordhaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kala duwanaanshaha dakhliga oo sii kordhaya
Publicerat torsdag 16 februari 2017 kl 11.34
Lacag waraaqo iyo qadaadiic isugu jira.
Kala duwanaanshaha dakhliga ayaa kordhay shantii sano ee u dambaysay waddanka Sweden.
sida uu maqaal ku daabacay Wargayska Dagens samhälle.
Maqaalkan oo xog ururin ka sameeyay kala duwanaanshaha xagga dhaqaalaha qoyska ayaa lagu ogaaday in 286 degmo oo kamid ah 290ka degmo ee waddanku ka kooban yahay uu dakhligoodu sii kala kacayo amaba sii kala durkayo. Taasi oo macnaheedu tahay in dadka dhaqaalaha wanaagsan haystaa uu dhaqaalohoodu sii wanaagsanaanayo, halka kuwa dhaqaalohoodu liito ay hoos usii degayaan. Xogta maqaalkani qoray ayaa caddaysay in degmooyinka iyagu qaata dadka qaxootiga ah ay yihiin kuwa dakhligoodu hooseeyo, iyadoo degmooyinka dakhliga wanaagsan helaa ay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn.
Ra'iisalwasaaraha Sweden Stefen Löven iyo Annie Lööf oo ah gudoomiyaha xisbiga centerpartiet ayaa iyagu isku raacsan in iminka laga fekero lana joojiyo kala durugga dakhliga ee waddanka.
Xogtan ayaa lagu sheegay in kala duwanaanshuhu aanu ku xidhnayn xukuumadda markaa talada haysa, iyadoo islamarkaana kala durugga dhaqaalaha qoysku uu ugu badnaa sannadihii 2014 iyo 2015.
Jesper Roine oo ah cilmi-baadhe ka tirsan machadka dhaqaalaha ee Handelshögskolan ayaa sheegay in kororka kala duwanaanshaha dakhligu aanu ku xidhnayn kala duwanaanshaha mushaharooyinka, hase yeeshee uu ku xidhan yahay kororka dakhliga raasimaalka, oo markaa dadka dhaqaalaha fiican haystaa uu dhaqaalohoodu sii wanaagsanaanayo. Taas bedlekeeda ayaa lagu tilmaamay in hoos u dhaca dakhligu uu ku xidhan yahay Dhaqaalaha ay bixiso hay’adda caymiska daweynaha oo aan u kordhin sida mushaharooyinku ay u kordheen.
Warbixinta maqaalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in kala duwanaansaha dhinaca dakhliga waddanku uu imminka ka hooseeeyo sidii uu ahaa sanadihii qarnigii dhowaa ee 1900-kii marka loo eego waddanka Maraykanka oo farqi weyn oo dhinaca kala duwanaanshaha dakhligu ka jiro.
Si kastaba ha ahaatee warbixinta maqaalkan ayaa caddaysay in kalakaca farqiga dakhligu uu si aad ah u kordhay sannadihii u dambeeyay gaar ahaan sannadihii 2014 iyo 2015 taasi oo sida warbixinta lagu sheegay ay qayb ka tahay dadka qaxootiga ah oo waddanka soo galaya oo kordhay.